I-Tot Totem Iifoto kunye nezifundo Iimbhere zifundisa
Iibhere njengeziNkokeli Zomoya
Iifoto zeebhere. I-Canva Collage / Izithombe nge-Getty
Iibhere ngokubanzi zisifundisa ukunciphisa nokugcina amandla ethu. Izala ezithwalayo nazo zihlobene nokuvuswa ngaphakathi. I-Bear isifundisa ukuba iimpendulo zobomi azikho ngaphezu kobulumko bakho. Akukho mfuneko yokujonga ngaphandle kwakho xa ibhere likufuphi. Iibhere zikhuphuka kwaye zingasifundisa ukuba sifinyelele kwiindawo eziphakamileyo. Uthwala uthanda ubusi kwaye usifundise ukuxabisa ubomi obumnandi.
Iimpawu ezininzi zezilwanyana zeGalleries ngeNgingqi okanye kwiHatiti
Umgcini we-Black Bear Totem. Uhlobo oluthile / i-Getty Images
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: ukuqonda, ukuqonda, ukunyamezela, ukuvusa ngokomoya
Izihlobo: iPanda Bear, Grizzley Bear, Bear Bear
Ukuhlaziywa kunye nokuhoxiswa kwendalo, iibhere ezimnyama zihlala zihlala zodwa. Iibhere eziMnyama nazo zihamba kakuhle. Yonke inobhere iyakhwela, kodwa ngenxa yokuba ibhere elimnyama lincinci, unako ukunyuka kumasebe aphezulu ngaphandle komthwalo wesisindo esingaphezulu. Ibhere elimnyama lifundisa ukubaluleka kokuzibophelela ukuze ufumane ulwazi oluphezulu.
U-Ted Andrews, umbhali we- Animal Speak uthi: "Nabani na i totem ibhere kufuneka agcine i cub ngokuphila kwayo kwaye ngezinye izikhathi zikhuphule imithi - ukuba nje ufumane umbono ocacileyo." Izibhere ezimnyama zidlala kakhulu, njenge totem zisifundisa ukuba sihlale siqhagamshelwe kumntwana ngaphakathi .
I-A ukuya kwiZ Animal Totems
Iindaba zokuBheka kunye noTyelelo lweTotem
Umgcini we-Knowless Knowledge Grizzly Bear. I-Corbis ngokusebenzisa i-Getty Images / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: ukuqonda okuphakamileyo, ubumnandi bobomi, uhlobo oluthile
Izihlobo: iPanda Bear, Black Bear, Bear Bear
Ndiyazi ukuba ndihanjelwa ibhere xa ndifumana ukutyeba kwamatyala kwaye ndenze isigqibo sokutsala ekuhlaleni nabanye. Kwakhona, nanini nanini xa ndikhungatheka okanye ndiqonda ukuba ndiyinto ebonisa ukuba i-bear yami iyacaca kufuneka ibuyiswe. I-Bear idinga ukulala ngokwaneleyo ... okanye iyancipha kwaye inandiphe ubomi. Uthwala uthanda ujonge kwaye uya kukufundisa ukuqonda ubunjani bokuphila obumnandi xa ubavumela.
I-grizzly mhlawumbi ibhere eyaziwa ngokutsha kwayo. Xa limi kwi-back back heunches ubukhona bayo kunye nesithunzi esichukumisayo singaba nzima kakhulu. I-Grizzly ifundisa ukubaluleka kokuthatha ukuma nokulawula amandla. Iibhere ngokubanzi zikwazi ukuqonda, kuba ubungakanani bayo obukhulu i-Grizzly njenge-totem bubonisa ukuqonda ngokukhethekileyo. I-Grizzly inesimo esilungeleleneyo, idonsa kwimisebenzi ekhupha amandla ayo. I-Grizzly iyinikela ixesha lokubuyisela. Xa kuvela uGrizzly ungadinga ukuzibuza ukuba unxaxheba kwimisebenzi eyenza amandla akho okuphila. Kusenokuba ixesha lokutsala kwaye linciphise iinyanga ezimbalwa. I-Grizzly Bear ngumgcini womoya wesalathiso sentshona okanye i-quadrant yamanzi yevili leMveli yaseMelika
Nomad Panda Bear Totem. Tom Breakfield / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: yedwa, imiba yokuzala, ukulungelelanisa
Izihlobo: i- Grizzly Bear, i-Black Bear, i-Polar Bear
I-Pandas imnandi kwaye ihamba ngokubonakala kodwa isomelele kakhulu. Gcina oku engqondweni xa wenza izigwebo ngokusekelwe kwimibonakalo yokuqala. Umbala ochaseneyo woomnyama nomhlophe woboya bePanda ulwahluko olumele kumasiko. Umnyama nomhlophe nazo zibonakaliswe kwiimpawu ze- Yin ezibonisa ukubaluleka kokulinganisela phakathi kwamandla angamadoda namabhinqa. Xa i-Panda iqhelekile kulungile ukusebenzela ukulinganisa nantoni na ekhuphe i-skelter ebomini bakho.
I-Panda njenge-totem nayo ibonisa ukudibanisa ngenxa yeembali zaseChina zinika amaPandas amakhulu njengezipho eziphambili kumanye amazwe. Ukubonakala kukaPanda kuyinto engathandekiyo, nabani na uPanda njenge- totem yakho yezilwanyana banomdla ekuhlolisweni kwamazwe angaphandle kunye neenkcubeko ezahlukeneyo.
I-Agile tree climber, i-Panda njenge totem inekhono ekhethekileyo lokungena kwilwazi eliphezulu. Iyeza lePanda ngumfundisi omangalisayo wokuphuhlisa umphefumlo.
I-Polar Bear njengeTotem
Hunter Polar Bear. Ariadne Van Zandbergen / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: ukwesaba, ulaka, umniki, unamandla
Izihlobo: iPanda Bear, Black Bear, Grizzly Bear
Iibhere ze-Polar ziyaziwa ngokungabikho noloyiko. Iibhere ze-Polar zizingeli ezilungileyo kwaye zihamba ziqhenqele. Abantu ngabantu babo kuphela. Ngenxa yokuba iintsimbi zePowlar ziphakame kakhulu kwi-chain chain, kuyaqondakala ukuba kutheni bengenakoyika. Xa kuvela i-polar uya kufuna ukuvavanya ukwesaba kwakho ngokujonga izinto ezenza usebenze okanye usebenze. Okanye, unokufuna ukuqinisa iinkalo zobuthathaka.
Ibhere lePowlar ngumlungiseleli olungileyo kwintsapho yakhe, nabani na onobumba bePolar njenge-totem yakhe inomthwalo ohloniphekileyo wokubonelela abanye. Kukulungele ukuba unamandla kunakekelwa ngababuthathaka. I totem yebhere iyabuza ukuba nayiphi indlela yokuziphatha enobukrakra oyibonisayo yinjongo yokuzivikela kwaye ayifuni ukunyelisa.
I-Z ukuya kwiZinyama
Iziqu zezilwanyana. Dorling Kindersley / Getty Izithombe
Iilwanyana ezingaphezu kwekhulu zizaliswe njenge-totems zomoya. Le ngxelo esheshayo ukufikelela kwi-totem yakho yezilwanyana okanye ukujonga izilwanyana ezikuvakatye ngoku kutshanje ngamaphupha okanye ngokwenene.
Yintoni Enokwenza Uphawu Lwakho lweZodiac Lomelele?
IiBog Bodies zaseYurophu
Sally Hemings 'Abantwana